काठमाडौँ कुन कुन नगरपालीकाहरुमा को को छन् त निर्वाचन अधिकृत ? « Surya Khabar
काठमाडौँ कुन कुन नगरपालीकाहरुमा को को छन् त निर्वाचन अधिकृत ?
काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्लाका १० वटा नगरपालिकामा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि मंगलबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
प्रत्येक नगरपालिकामा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि कार्यालय स्थापना गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालले जानकारी गराएका छन् । नार्गाजुन नगरपालिकामा सुदर्शन लामिछाने, शङ्खरापुरमा भुवनेश्वर पौडेल, गोकर्णेश्वरमा निर्मला सुवेदी र दक्षिणकालीमा प्रतिमा पोखरेललाई निर्वाचन अधिकृत तोकि पठाइएको छ ।
ती निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सम्बन्धित नगरपालिकाका लागि उम्मेदवारको मनोनयनदेखि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सबै काम गर्नुपर्नेछ । यसअघि यही वैशाख ३ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । रासस